Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း)
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
သွားနှင့် သွားဖုံးတို့တွင် သွားဂျိုးများတည်မှု စုပုံလာသည့်အခါတွင် သွားဖုံးရောဂါများ ဖြစ်လာပါသည်။ သွားဖုံးရောင်ခြင်းမှာ ပျောက်ကင်းနိုင်သော သွားဖုံးရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ သွားဖုံးများကို နီမြန်း ဖောင်းကြွစေပြီး သွားတိုက်သည့်အခါ အလွယ်အတကူ သွေးထွက်စေပါသည်။
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါသည် အလွန်အဖြစ်များ၏။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်သောအချက်အလက်များကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
သွားဖုံးရောင်ခြင်း ၏ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာများမှာ
သွားတိုက်နေစဉ်နှင့် တိုက်ပြီးနောက် သွေးထွက်သော သွားဖုံး
နီမြန်း၊ ဖောင်းကြွ၊ နာကျင်သော သွားဖုံး
ခံတွင်းနံ့နံခြင်း သို့မဟုတ် ခံတွင်းတွင် အရသာဆိုးခြင်း
သွားဖုံးနှင့်သွားကြားတွင် နက်ရှိုင်းသော အခွက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ဝါးလျှင် အပေါ်အောက်သွားများ အံကြမဖြစ်တော့ခြင်း သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အံ့ကြမဖြစ်ခြင်း
လက္ခဏာများကို သတိမထားမိရင်တောင် သင့်တွင် သွားဖုံးရောဂါအဆင့်တစ်ခုခုတော့ ရှိနေနိုင်ပါသေးသည်။ တစ်ချို့လူများတွင် သွားဖုံးရောများမှာ သွားတစ်ချို့တွင်သာ ဖြစ်တတ်၏။ ဥပမာ – အံသွားများ။ သွားဆရာဝန် သို့မဟုတ် သွားဖုံးအထူးကုမှသာ သတိထားမိနိုင်ပြီး သွားဖုံးရောဂါတိုးမှုကို ဆုံးဖြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွားဂျိုးများမှာ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တခြားသောအချက်များကလည်း သွားဖုံးရောဂါကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ –
ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှု ဥပမာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်၊ အပျိုဖော်ဝင်စ၊ သွေးဆုံးချိန်နှင့် လစဉ် ရာသီလာချိန် စသည့်ချိန်များတွင် သွားဖုံးများမှာ အထိမခံပိုဖြစ်တတ်သောကြောင့် သွားဖုံးရောင်နိုင်ချေ ပိုလွယ်ကူစေပါသည်။
ဖျားနာမှုများကလည်း သင့်သွားဖုံးများကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် ကင်ဆာ သို့မဟုတ် HIV တို့လို ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုထိသော ရောဂါများ ပါဝင်ပါသည်။ ဆီးချိုမှာ ခန္ဓါကိုယ်၏ သကြားသုံးနိုင်စွမ်းကို ထိသောကြောင့် ဆီးချိုသမားများတွင် ပိုးဝင်ခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါ၊ သွားပိုးစားခြင်းများကို ဖြစ်နိုင်ချေများစေပါသည်။
ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဆေးများကလည်း ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ချို့ဆေးများက သွားနှင့်သွားဖုံးကို အကာအကွယ်ပေးသော တံတွေးစီးဆင်းမှုကို နည်းသွားစေတသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ Dilantin လို အတက်ကျဆေးများနှင့် Procardia နှင့် Adalat တို့လို နှလုံးအောင့်သက်သာဆေးများက သွားဖုံးတစ်ရှူးများကို မူမမှန်ကြီးထွားစေတတ်ပါသည်။
ဆေးလိပ်သောက်တတ်သော အကျင့်ဆိုးကလည်း သွားဖုံးတစ်ရှူးများ အနာကျက်နိုင်စွမ်းကို ခက်ခဲစေတတ်ပါသည်။
နေ့စဉ် သွားတိုက်ခြင်း သွားကြားကြိုးခြစ်ခြင်း မပြုလုပ်သော ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး ဂရုမစိုက်သူတို့တွင် သွားဖုံးရောင်ခြင်းမှာ အလွယ်တကူဖြစ်တတ်၏။
မိသားစုမျိုးရိုးတွင် သွားရောဂါများရှိပါကလည်း သွားဖုံးရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သော အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
သွားဖုံးရောင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
လူကီးမီးယား၊ HIV/AIDS သို့မဟုတ် တခြားသော အခြေအနေများကြောင့် ကိုယ်ခံအားကျခြင်း
တစ်ချို့သော ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် မှိုကူးစက်မှုများ
ဟော်မုန်းပြောင်းခြင်း ဥပမာ ကိုယ်ဝန်၊ ရာသီစက်ဝန် သို့မဟုတ် ကိုယ်ဝန်တားဆေး စသည်များ
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ခံတွင်းအား စမ်းသပ်ကြည့်ရှုသည့်အခါ သွားဆရာဝန်သည် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါလိမ့်မည်။
သွားဖုံးသွေးယိုခြင်း၊ ဖောင်းကြွခြင်း၊ မာခြင်း၊ သွားခွက်နက်ခြင်း (သွားနှင့်သွားဖုံးကြားမှ နေရာ ကျယ်ပြီးနက်လေလေ ရောဂါပြင်းထန်လေလေ ဖြစ်သည်။)
သွားလှုပ်ရှားပုံ၊ sensitivity နှင့် သွားထက်အောက် အလိုင်းညီမညီ
မေးရိုး (သွားများတစ်ဝိုက်တွင် အရိုးပျက်စီးမှု ရှိမရှိ)
Gingivitis (သွားဖုံးရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သွားရောဂါများကို ကုသရသည့်အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျန်းမာသောသွားဖုံးများ သွားနှင့်ပြန်ပြီးမြဲအောင် တွယ်စေလိုခြင်း၊ ဖောင်းကြွမှုကိုလျော့ချခြင်း၊ သွားခွက်နက်ခြင်းအား လျော့ချခြင်း၊ ပိုးမဝင်စေခြင်းနှင့် ရောဂါတိုးမှုကိုတားခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကုသမှုရွေးချယ်ခြင်းမှာ ရောဂါအဆင့်၊ အစောပိုင်း ကုသမှုအပေါ် သင်၏တုန့်ပြန်ပုံ၊ သင့်တစ်ကိုယ်ရေကျန်းမားရေး စသည်တို့အပေါ် မူတည်ပါသည်။ ရွေးချယ်နိုင်မှုမှာ မခွဲမစိတ်ပဲ ဘက်တီးရီးယားပိုးကိုသာထိန်းချုပ်ခြင်းမှနေ ထောက်ပံ့တစ်ရှူးများကို ပြန်လည်းပြုပြင်ခွဲစိတ်ခြင်းအထိ ရှိပါသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက သွားဖုံးရောင်ခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနှင့်အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် သွားဖုံးရောင်ခြင်း ကိုကုသသည့်နေရာနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
သွားဖုံးရောင်ခြင်းမှာ ပျောက်ကင်းနိုင်သောရောဂါဖြစ်ပြီး ရောဂါတိုးမှုကိုလည်း သွားဂျိုးထိန်းချုပ်ခြင်းအား သင့်တော်စွာစီမံပါက ဖြစ်ရပ်အားလုံးတွင် တားဆီးနိုင်ပါသည်။ သင့်တော်သော သွားဂျိုးထိန်းချုပ်ခြင်းတွင် တစ်နှစ်ကိုနှစ်ကြိမ် ကျွမ်းကျင်သူနှင့် ဖယ်ရှားခြင်း၊ နေ့စဉ်သွားတိုက်ခြင်း၊ သွားကြားခြစ်ခြင်းတို့ပါဝင်ပါသည်။ သွားတိုက်ခြင်းက သွားပေါ်မှဂျိုးများကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပြီး သွားကြားကြိုးခြစ်ခြင်းက သွားနှင့် သွားဖုံးကြားမှ အစာမှုန်များ ဂျိုးများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားသတ်ခံတွင်းသန့်စင်ဆေးများက ဂျိုးနှင့် သွားဖုံးရောဂါဖြစ်စေသော ဘက်တီးရီးယားများကို လျော့ချပေးကြောင်း အမေရိကန်သွားကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက ဆိုပါသည်။
တခြားသော လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းများကလည်း သွားဖုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေ၊ ပြင်းထန်နှုန်းနှင့် ရောဂါတိုးနှုန်းတို့ကို လျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ပါ – ဆေးရွက်ကြီးသုံးခြင်းက သွားဖုံးရောင်မှုကိုဖြစ်စေသော သိသာသည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သူများမှာ မသောက်သူများထက် ၇ ဆ ပိုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင် ကုသမှုမထိရောက်တတ်ပါ။
ဖိစီမှုများကိုလျော့ပါ – ဖိစီးမှုများက ခန္ဓါကိုယ်၏ ကိုယ်ခံအားကိုကျစေပြီး ပိုးများကို တိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျန်းမာမျှတာသောအစားအသောက် – သင့်တော်သောအာဟာရများက ကိုယ်ခံအားကို ကောင်းစေပြီး ပိုးများကိုတိုက်နိုင်စေပါသည်။ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင့်ပစ္စည်းများပါသော အစာများ ဥပမာ ဗီတာမင်အီးပါသော ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ၊ ခွံမာသီး၊ အစိမ်းရောင်အရွက်များ နှင့် ဗီတာမင်စီ ပါသော ချဉ်သောသစ်သီးများ၊ ပန်းမုန်လာစိမ်း၊ အားလူးတို့က ပျက်စီးနေသော တစ်ရှူးများကို ပြန်ကောင်းအောင်ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါသည်။
သွားကြိတ်ခြင်းများကို ရှောင်ပါ – ၎င်းမှာ သွားအောက်ခံ ထောက်ပံ့တစ်ရှူးများကို ပိုအားသက်ရောက်စေပြီး တစ်ရှူးပျက်စီးမှုကို တိုးသွားစေနိုင်ပါသည်။
ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ကောင်းကောင်းလိုက်စားသည့်အပြင် တခြားကျန်းမာသောလူနေမှုပုံစံကို လုပ်နေသော်လည်း အမေရိကန် ၃၀ % မှာ မျိုးရိုးဗီဇအရ သွားရောဂါများ ပိုဖြစ်နိုင်နေသေးကြောင်း အမေရိကန်သွားဖုံးကျန်းမာရေး အကယ်ဒမီက ဆိုပါသည်။ ဗီဇအရ ပိုဖြစ်လွယ်သောသူများမှာ တစ်ချို့သွားဖုံးရောဂါများ ဖြစ်နိုင်ချေ ၆ ဆလောက်ပိုမြင့်နေပါသည်။ သင့်မိသားစုအတွင်း သွားဖုံးရောဂါဖြစ်ဖူးသူ ရှိနေပါက သင့်တွင် ဖြစ်နိုင်ချေပိုမြင့်နေကြောင်း သိထားရမည်။ သင့်၌ သွားဖုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများနေပါက သွားဆရာဝန်သည် အကြိမ်ရေပိုများများ check-up လုပ်ရန်၊ သန့်ရှင်းရန်၊ ကုသမှုခံယူရန် လမ်းညွှန်ပါလိမ့်မည်။
Gingivitis. http://www.webmd.com/oral-health/gingivitis. Accessed June 23, 2017.
Gingivitis and Periodontal Disease (Gum Disease). http://www.webmd.com/oral-health/guide/gingivitis-periodontal-disease#1. Accessed June 23, 2017.
Gingivitis. http://www.colgate.com/en/us/oc/oral-health/conditions/gum-disease/article/gingivitis. Accessed June 23, 2017.